Rooder Technology Limited dziri muna Shenzhen. Tiri kuedza kuvaka TOP muchiso kuti dzemagetsi Scooters mu China. Kuburikidza pemakore anoverengeka okukura, tave kuzivikanwa zvose panguva dzokudya uye mhiri kwemakungwa. chikwata chedu nyanzvi iri specialized kuzvipembedza BALANCInG Scooters, hoverboards uye Skateboards design, kugadzira, kumusika uye basa. Takaaparadza kupa vakaisvonaka pfupi-kure chokufambisa maturusi kuti munhu nokuomerera evanhu basa simba okuponesa, pasi kabhoni uye zvakatipoteredza kudzivirira.
kambani yedu yemberi nhamba akazvimirira rezvedzidzo pfuma kodzero uye makirisito rwokugadzira. With kukura chinangwa simba okuponesa, zvakatipoteredza dziviriro, tine zvitupa CE, FCC, RoHS uye zvakasimba kuramba basa ezvinhu ISO9001. Kuburikidza makore kukura, isu vakatanga Rooder mashoma itsva zvivezwa Scooters.
Our Scooters / hoverboards / stakeboards chatengeswa vose pamusoro nyika uye zvinowanzoshandiswa motokari pachake, mapurisa pabasa, Metro kutakura, yendege uye pamisasa makuru, yevedza makwapa uye gorofu makosi, etc.
boka redu Vatsigiri zvavakanga vachida kuita pamuviri kutya zvakasikwa, uye tinotenda kuti sayenzi anoshandura upenyu kusimbisa nzwisisika magadzirirwo R & D hurongwa akangwara panze mitambo zvinhu uye motokari pachedu. Tine zvikuru nyanzvi uye ruzivo magadzirirwo chikwata mumunda, uye isuwo tine dzinonetsa akazvimirira bvumidzwa michina, yepamusoro bvunzo midziyo uye kugadzira chawo izvo kunovimbisa zvigadzirwa vakakwana. Our kuzvimirira R & D kugona kwave zvikuru vakabvuma nokuda indasitiri, uye isu tave kuzivikanwa pamwe kubatana yepamusorosoro vachida.
Nokutora nekubata werudzii zvakakomba, basa, kuvimbwa, kuzvitsaurira, kuomerera, tinogara vanatsiridze zvigadzirwa yepamusoro uye yedu basa, kugutsa vatengi vedu.
chiratidzo wedu Kuti Upenyu More pakanaka, Zvichienderana uye Healthy.